Janeraal Indha-cadde: “Haddaad nabad weyso dagaalku waa sharaf” | KEYDMEDIA ONLINE
Janeraal Indha-cadde: “Haddaad nabad weyso dagaalku waa sharaf”
Sheekh Yuusuf Indha-cadde, oo si adag uga hadlay xaaladda dalka, ayaa ku baaqay in dadka Muqdisho deggan, ka hor tagaan damaca Farmaajo ee ah laalidda sharciga iyo kala sarreysiinta dadka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Janeraal Yuusuf Maxamed Siyaad ‘Indha -cadde’, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaaladda siyaasaded ee dalka ay mareyso meel aad u liidata taas uu tilmamay in ay soo socotay Afartii sano ee la soo dhaafay.
Janeraal Indha-cadde, ayaa Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday, Farmaajo ku eedeeyay inuu baal maray wixii loo igmaday, kaliyana ay kaga soo hartay, ku tumasho sharci.
Sheekh Yuusuf Indha-cadde, wuxuu layaab ku tilmaamay, waxa uu ugu yeeeray beegsi dad gooni ah oo ay bartilmaameed sanayaan Farmaaajo iyo kooxdiisa, iyo naas-nuujinta loo sameynayo gobolka uu ka soo jeedo ee Gedo.
“Waxaad ogtihiin in wixii hub iyo awood ciidan dalku lahaa la geeyay gobolka Gedo, si loo naas-nuujiyo qabiil gooni ah, waxaad ogtihiin weerarkii CCWarsame, weerarkii Cabdiqeybdiid, weerarkii Haantadheer, weerarkii Bariire, weerarkii Madaxweynayaashii hore, weerarkii saadaq Joon iyo kuwo kale”, Ayuu yiri Yuusuf Indha-cadde.
Wareysiga oo dhinacyo badan taabanayay, ayuu hoosta ka xariiqay, Jeneraal Yuusuf, in xaaladda siyaasadeed ee dalka ay mar hore ceyn wareegtay, halkaanna lagu soo gaaray, Dowlad jacaylka dadka Muqdisho deggan.
Wuxuu, si adag ula hadlay Taliyaha ciidanka lugta Jeneraal Biixi, wuxuuna ugu yeeray danbiile hore u galay danbiyo waaweyn, walina u tafa xeydan galidda kuwo cusub.
“Biixi wuxuu Xasuuq ka geystay Qorilow iyo Baladweyne, wuxuu dilay Fannaankii weynaa ee Cabdi Bashiir Indha-buur, waa ninka Madaxweynayaasha weeraray, waa ninka Saadaq weerarka ku ah, waa taliyaha qarsoon ee Xoogga dalka”. Ayuu yiri Indha-cadde.
Wuxuu wax kama jiraan ku tilmaamay ruqseynta Janeraal Saadaq Joon, wuxuuna Fahad Farmajo iyo Biixi, ku eedeeyay in ay ka shaqeynayaan burburka dalka iyo Dowladnimada.
Ugu danbeyn, Jananku, wuxuu ku baaqay in dadka reer Muqdisho, dhiigooda, maalkooda iyo Sharaftooda, ka difaacdaan Farmaajo, oo uu ku tilmaamay, Hoggaamiye Kooxeed.
“Haddaad nabad weyso, haddaad ixtiraam weyso, haddaad maamul weyso, dagaalku waa sharaf. “Ayuu yiri Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad ‘Indha -cadde’.